I-Redmi 8A: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kule veki thina iinkcukacha zokuqala malunga neRedmi 8A sele zifikileImodeli entsha ngaphakathi kuluhlu lokungena lwegama lesiTshayina. Emva kokuvuza okucingelwayo umhla wentetho yale modeli intsha yohlobo lwesiTshayina, kwavezwa ukuba sinokulindela Ibhetri enkulu yenxalenye yakhe. Okokugqibela, ifowuni ngoku isemthethweni kwaye siyazi yonke into ngayo.
I-Redmi 8A iseyimodeli ethobekileyo ngokubhekisele kwintsebenzo, njengoko siqhele ukwenza kolu hlobo lwemodeli. Nangona uphawu lusishiyile ngothotho lweziphuculo kuyo. Ibhetri enkulu kunokwenzeka ukuba yenye yeenguqulelo amagqabantshintshi kule fowuni.
Uyilo lwefowuni ayibonisi mininzi kakhulu, Ukulandela ifashoni yentengiso. Inotshi ye-Oval, emile njengethontsi lamanzi, engalawuli kakhulu isikrini. Amafreyimu amacala amancinci kakhulu nangayiphi na imeko, ukuze kusetyenziswe ngcono umphambili kule meko. Uyilo esilubonayo kakhulu.
1 Ukucaciswa kweRedmi 8A
Ukucaciswa kweRedmi 8A
Kwinqanaba lobugcisa sinokubona ukuba le Redmi 8A yinkqubela phambili kolu luhlu, Ukuphucula izinto ezahlukeneyo ngokubhekisele kwezinye iimodeli zangaphambili ezikuyo. Uyilo luhlaziyiwe, ukuziqhelanisa nefashoni yangoku kunye neencasa, ukongeza ekusishiyeni neempawu ezikhoyo ngoku, ukuze ifowuni ivuselelwe kwaye ibonise ukuqhubela phambili okubalulekileyo kuluhlu olulula lweshishini laseTshayina. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
Isikrini: 6,22-intshi IPS LCD isisombululo HD + kunye Gorilla Glass 5 ukhuselo
I-RAM: 2/32 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi: I-32 GB (Iyandiswa nge-MicroSD)
Ikhamera esemva: 12 MP nge f / 1.8 ukuvula
Ibhetri: 5.000 mAh ene-18W etshaja ngokukhawuleza kunye ne-10W kwitshaja ifakiwe
Inkqubo yokusebenza: I-Android 9 Pie ene-MIUI 10
Ukunxibelelana: Dual 4G, LTE, WiFi 802.11 a / c, Bluetooth 4.2, GPS, USB C, FM Radio
Ifowuni ihlaziyiwe, ukuze sifumane isikrini esikhudlwana, esingaphezulu kweesentimitha ezi-6, into ekudala ikade ingacingelwanga kuluhlu olusezantsi. Inkampani izibophelele kuyilo lwangoku ngakumbi kule Redmi 8A. Kwelinye icala, ibhetri yenye yezona zinto zibalulekileyo kuyo. Ibhetri yamandla angama-5.000 mAh iyasetyenziswa, ekwafika kunye nokutshaja okukhawulezayo kwe-18W, nto leyo ebaluleke kwangaphambili kweli candelo lentengiso lenkampani. Njengesiqhelo ngaphakathi kuluhlu olusezantsi, ayisebenzisi isivamvo somnwe, kodwa sifumana ukuvulwa ngokubonwa kobuso kwifowuni, kwisivamisi sayo sangaphambili.
Kwibala lokufota, njengesiqhelo kolu luhlu, sifumana iikhamera ezilula. Inzwa ekhethekileyo kwicala ngalinye kule Redmi 8A. Ikhamera ye-12 MP isetyenziswa ngasemva, ngaphandle kotshintsho kule nto ngophawu. Eyona iphuculweyo yikhamera yangaphambili kule meko, ethi ngoku ibe yi-8 MP, ukuze sikwazi ukuthatha iiselfie ezingcono ngale fowuni.
I-Indiya iye yaba yintengiso yokuqala apho le Redmi 8A yenziwe ngokusemthethweni. Nangona kulindeleke ukuba kwezi veki ifowuni izakuphehlelelwa nakwezinye iimarike zaseAsia. Okwangoku asinalo ulwazi malunga nokuqaliswa kwesi sixhobo eYurophu. Asazi ukuba kukho izicwangciso, ke silindele iindaba ezivela kumenzi waseMelika uqobo malunga noku.
Ifowuni iya kukhutshwa kwiinguqulelo ezimbini ze-RAM kunye nokugcinwa kwintengiso. Iya kufika ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama nobomvu kwintengiso, njengoko sele kubonisiwe kwiifoto ezisemthethweni zefowuni. Amaxabiso eIndiya kwiinguqulelo ezimbini zale Redmi 8A zezi zilandelayo:
Imodeli ene-2/32 GB inexabiso kuma-6.499 ama-Indian rupies, malunga ne-83 yeerandi yokutshintsha
Inguqulelo ene-3/32 GB isungulwe ngexabiso le-6.999 Indian rupees, ejikeleze i-89 euros yokutshintsha
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Redmi 8A: Uluhlu lokungena olutsha lwebhrendi
Nge-1 ka-Okthobha iyakufika imibala eyahlukileyo ye-Honor 9X ebizwa ngokuba yiHolographic Icelandic White